Apple inogona kutenga mamwe mafirimu emafirimu muna 2017 | IPhone nhau
Apple inogona kutenga ma studio emamuvhi muna 2017
Apple yave ichibatanidzwa mune akateedzana runyerekupe anoiisa iyo, yakatarisana neiyi ichangoburitswa 2017, mukutenga firimu uye terevhizheni studio muHollywood. Iyi danho yaizopindura kuchishuwo chekambani inotungamirwa naTim Cook yekupa vashandisi vayo basa rekuteerera pasi pekunyoreswa. Kushingairira uku hakasi kekutanga kuona mwenje. Iyo Cupertino-yakavakirwa kambani yanga ichiedza kupinza musoro wayo mumusika uyu kwemakore mazhinji ikozvino, asi zvinodiwa kune zvimwe zvigadzirwa zveApple zvakabvisa kuyedza kwekare. Zvino, zvinoita sekunge Tim Cook ari kuda kupa mwenje wekupedzisira wegirini kuchirongwa, izvo zvaizoreva kukosha kwakakosha.
Panyaya iyi, muvambi weMega, Kim Dotcom, akaedzazve kuita fungidziro nezve mafambiro eApple. Pachiitiko ichi, akavimbisa (uye akasimbisa nezvazvo) kuti kambani yeManzanita ichatora dzimwe studio dzinozivikanwa dzeHollywood mukati megore rino ra2017. kushamisika kune ani zvake.
Muchokwadi, isu tichangobva kudzidza kuti Apple yaive ichiongorora mukana wekupa zvinyorwa zvekuona kune vashandisi vayo kumba, kunyangwe iyo firimu iri kutaurwa ichiri kuratidzwa mumitambo. Izvi zvine mukana wekuchinja mashandisiro anoita mafirimu vateereri, uye kutenga studio hazvingangonzwisisike munguva pfupi, asi zvingangorevawo kupa Apple nzvimbo mune chero nhaurirano pamusoro penyaya idzi.
Nekudaro, kunyangwe paine kukwezva kwepfungwa, zvinomanikidzwa kuve, zvirinani, kusahadzika zvishoma nezve kunobva ruzivo. Kim Dotcom haana izvo zvinonzi kutendeseka ... zvachose, nekuda kwehupenyu hwaanotungamira uye nhoroondo yake yekusawirirana neruramisiro. Kunyangwe kana iwe uri muchinzvimbo chekuziva kana Apple iri kutsvaga kutenga studio yemuvhi, hatigone kuva nechokwadi, asi dzidziso yacho ingaite zvine musoro uye yaizopindura nenzira yazvino yeApple mune mamwe matunhu maakambofunga pinda.
Nguva ichataura kana Kim Dotcom aive akarurama mune zvaakataura, asi parizvino, isu tinoramba tine chokwadi. Kutenga firimu studio harisi basa riri nyore uye kutenga rimwe rine rakakodzera kataraki kuenderana neApple zvakatooma. Uye zvakare, iyo Apple chirongwa chaizosangana nezvakawanda zvipingaidzo. Chimwe chezvakakosha kuve kukwikwidza uko Apple kwaizowana mumusika. Akawanda masevhisi ndeaaya nhasi arikupa zvakabhadharwa audiovisual zvemukati kune vashandisi veaya masevhisi pasi pekunyoreswa. Netflix, HBO, Amazon Prime Vhidhiyo mimwe yemienzaniso yemusika uri kuwedzera kukwezva kutariswa kwemakambani matsva ari kuedza kushandura modhi yebasa. Nekudaro, iyo makwikwi haisi chinhu chekutyisidzira mumuzinda une Apple muCupertino. Apo pavakatanga iyo Apple Music sevhisi, vakwikwidzi venguva refu vakadai seSpotify kana zvitsva zvinoburitswa zvakawana budiriro huru senge Tidal vaive vatove pamusika. Apple haina kuteerera chero munhu uye yakadhiza nzira yayo, izvo zvakaita kuti igadzirise Apple Music muvateereri uye iwane chidimbu chepie yemimhanzi.
Mumusika wekuona nekuona, chinhu chikuru icho Apple inotarisira kutamba chiri kutepfenyura mukati kumhanyira mafirimu mazita ayo achiri mumitambo. Mhedzisiro yeiyi danho inogona kunyatso shandura mamiriro ekuona pamwe nekuona kunoitwa nematepi pavanosunungurwa. Nenzira imwechete iyo nhepfenyuro yeterevhizheni iri kuwana mukukosha ichienzaniswa nemafirimu mafirimu, ekutanga anogona kugadzirwa papuratifomu yeterevhizheni. kumhanyira pachinzvimbo chemitambo yemamuvhi.
Mugore tichaona kuti mazwi aKim Dotcom aive akarurama sei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple inogona kutenga ma studio emamuvhi muna 2017
Noti: Ita nezviyeuchidzo, mahara kwenguva yakati rebei
Rongedza mafoto ako ezororo neFilterra